I-Seychelles kunye ne-Shanghai Changfeng yoLwandle lweHlabathi ngokuSungulwa ngokuDibeneyo "kwihlabathi liphela" Iphulo lasehlotyeni
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » I-Seychelles kunye ne-Shanghai Changfeng yoLwandle lweHlabathi ngokuSungulwa ngokuDibeneyo "kwihlabathi liphela" Iphulo lasehlotyeni
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
I-Seychelles ejikeleze uMkhankaso weHlabathi weHlabathi
I-Seychelles yoKhenketho kunye ne-Shanghai Changfeng yeHlabathi yeLwandle (indawo yesizwe ye-AAAA kwinqanaba elibukekayo kwaye ikwipaki yaseChangfeng ekumbindi wedolophu yaseShanghai.), Inkxaso yegorha lezolonwabo lamazwe aphesheya "iMerlin Entertainment" (inkampani yesibini epakini ephambili emhlabeni ), isungulwe ngokusesikweni iphulo leholide "ngeHlabathi liphela" ngokusebenzisana "neeOctonauts zihamba emhlabeni" (Inkqubo yabantwana baseBritane eyaziwayo). Iindwendwe, ngakumbi iintsapho ezinabantwana bamenyiwe ukuba batyelele kwaye bafumane iphulo le- "Around the World" lokujonga iilwandlekazi zehlabathi.
Imbali ende yaseSeychelles yemizamo eqhubekayo yokhuselo lokusingqongileyo kunye nokhenketho oluzinzileyo, idala indawo ephambili yokhenketho kubahambi abanokubakho.
Iphulo “kwihlabathi liphela” iphulo leholide lasehlotyeni lasungulwa ngumboniso wezokhenketho waseSeychelles.
Iphulo leholide yehlobo liza kuqhubeka kuyo yonke iholide yasehlotyeni ngoJulayi nango-Agasti 2021.
Seychelles yoKhenketho ayiphelisanga kuphela le ntsebenziswano ukuze iqhubeke nokwandisa ulwazi kunye nokuthandwa kweSeychelles njengendawo yokuhamba phakathi kwabahambi, kodwa ikwabelana ngolwazi malunga nobomi baselwandle baseSeychelles, indalo esingqongileyo, amasiko endawo, kunye nokugxila kumxholo wokhenketho oluzinzileyo.
“Oku kuza ngexesha lokujika xa abathengi begxila ngakumbi kukhuselo lokusingqongileyo kunye namava ajolise kwindalo ngenxa yobhubhane we-COVID-19. Seytshels"Imbali ende yemizamo eqhubekayo yokukhuselwa kwendalo esingqongileyo kunye nokhenketho oluzinzileyo, idala indawo ephambili yezokhenketho kubahambi abanokubakho kwixesha elizayo njengoko umhlaba uqala kancinci ukuvula utshintsho olutsha kwiimfuno zabathengi", utshilo uMnu. Jean-Luc Lai-Lam, uMlawuli wase China .
Iphulo "kwihlabathi liphela" iphulo leholide lasehlotyeni lasungulwa ngumboniso wezokhenketho waseSeychelles owathatha iiveki ezimbini. Ngokusebenzisa iividiyo, imifanekiso, kunye nokunxibelelana okwahlukileyo (umzekelo, abantwana banokufunda ngobomi obahlukeneyo baselwandle kulwandle lwaseSeychelles kwaye banikwe amakhadi okupenda), iindwendwe (ngakumbi usapho olunabantwana) zinokuba namava, zifunde ngakumbi ngeSeychelles, kunye nendalo yayo okusingqongileyo, ubomi baselwandle kunye neengcinga zokhenketho oluzinzileyo.
Umkhankaso "Wehlabathi liphela" weholide zasehlotyeni uzakuqhuba yonke iholide yehlobo ngoJulayi nango-Agasti ka-2021, apho iSingapore, i-UK neFiji bazakutshintshana emva kweSeychelles ukubamba umboniso wabo iiveki ezi-2 inye.